Taxanaha 1870 Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Taxanaha 1870 Dragon® Dredge
Taxanaha 1870 ee loo yaqaan 'Dragon® cutterhead dredge' waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo weyn oo la qaadi karo kaas oo leh muuqaal gaar ah oo qoto-dheer kaas oo awood u siinaya in si qoto dheer wax looga qodayo laga bilaabo 5 ft (1.5 m) qodis qoto dheer. Intaa waxaa sii dheer, qashin-qubka jaranjarooyinkan wuxuu ka kooban yahay bamka loo yaqaan 'dredge pump' iyo kaaliyeyaal, kuwaas oo ay ku shaqeynayaan laba matoorro madax-bannaan oo loogu talagalay wax-soo-saar sare oo shaqeynaya oo ku dhex yaal guud ahaan hawlgalka.
Moodelkan waxaa badanaa loo adeegsadaa codsiyada sida qodista wabiga, soo celinta xeebta, dib u soo celinta dhulka, dhismaha jasiiradaha iyo xakamaynta daadadka.
1870 HALIS UGU DANBEEYA
Iyada oo dherer ahaan wadar warshadeed hogaamineyso, 1870 wuxuu bixiyaa balac ballaaran oo wax soo saar wanaagsan oo saacad kasto ah.
Waxaa lagu dhisay Ellicott nashqado adag oo waqti-la-hubiyey iyo nidaamka xakamaynta korantada iyo korontada, 1870-ka ayaa la door bidaa duruufaha durugsan iyo kuwa kulaylaha.
Noocyo buuxa oo xulashooyinka caadiga ah ee la heli karo, oo ay ku jiraan nidaamyada meelaynta ku saleysan GPS.
Mashruuca Mashiinka Weyn 3512: 1,280 HP (955 kW)
Qalab Mishiinka Kaabayaasha C-15: 475 HP (354 kW)
Wiishka wiishka ku shaqeeya
Dredge GPS raadinta barnaamijka
Mast leh calaamadaha hagista
Dheecaan xusulka swivel
Barroosinka ayaa guubaabaya ama gawaarida xajmiga leh